Magacaygu waa Sanni Gnankpe - Sheeko taabasho oo ka socota Warbaahinta Bulshada
Magacaygu waa Sanni Gnankpe
Dhibaatada Jimicsiga Dubai
Nabadgalyada Wanaagsan iyo Kuwa Fiican ee Dubai
Waxaa laga yaabaa 30, 2019
Published by Shirkadda Dubai City at Waxaa laga yaabaa 29, 2019
Magaalada Dubai waa madadaalo kulul
Magacaygu waa Sanni Gnankpe 22 sano jir Waxaan ka imid Jamhuuriyadda Benin ee Galbeedka Afrika, waxaan booqday 2-time Dubai, kii ugu horreeyay ayaa ahaa. Laga soo bilaabo Oktoobar ilaa Diseembar 2018 iyo Febraayo illaa Abril 2019.
Hadda waxaan qorsheynayaa inaan halkaas u guuro muddo dheer, waxaan isku dayayaa inaan la imaado shaqalaha duulista Emirates shirkadaha duullimaadyada ayaa ah kan ugu weyn, amaan ee ugu awooda badan uguna awooda badan caalamka kaas oo keena alaabada aduunka waxaana la aqoonsaday sanado gudahood in lagu guuleysto boqolaal abaalmarino.
Waxaan runtii jeclaan lahaa la shaqeeyaan shirkadaha Emirates sida shaqaalaha iyo shaqaalaha ayaan u mahad celineynaa qof kasta oo iga caawin kara inaan u saxno
Magacaygu waa Sanni Gnankpe - Shirkadda Dubai City lasoco warbaahinta bulshada.
Sanni Gnankpe waa diyaar!
Sanni wuxuu noqonayaa waxaanu raacnay Linkedin iyo Facebook muddo dheer. Had iyo jeerna waxaad siisaa talooyin qiimo leh dadka kale. Wuxuu u dhaqmaa inuu isu soo bandhigo qaab cajiib ah oo taabanaya kooxdeena. Dubai City Shirkaddu waxay had iyo jeer ka heshaa qaybo macluumaad oo ku saabsan khibradooda waxayna ka codsadaan shaqo doonka inay shaqo ka helaan Dubai.
Magaalada Dubai waa goob fasax kulul loogu talagalay. Magaaladan oo ah meelaha sare ee sare ee fuliyaasha fulinta iyo maal gashida milyan ee dirham ee kaabayaasha dhaqaalaha.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira shirkado badan oo la qiimeeyay iyo xarumo ganacsi oo hubaal ah in ay isbeddel ku sameeyeen meel ka baxsan aaga xeebta, halkaas oo dalxiisayaashu ay u daalaan gorgortanada, qorraxda, iyo xiisaha qoyska.
Dubai waxay caan ku tahay qurxinta quruxda sida goobaha Burj Khalifa (dhismaha adduunka ugu dheer) iyo meel dalxiis oo aad u qurux badan.
Laakiin magaaladan waxay leedahay waxyaabo badan oo dhaqameedyo iyo waxyaabo ay tahay in la sameeyo markaad halkaas ka shaqeyneyso. Iyo sidoo kale dhammaan farsamooyinka casriga casriga ah ayaa la raaci karaa oo ay isticmaali karaan dadka qurbaha ka yimid adduunka oo idil.
Waa maxay sababta Emirates Airline?
Hagaag, haddii aad raadineysid inaad ka shaqeyso Dubai. Waa inaad tixgelisaa kaliya diyaaradaha ugu fiican. Kooxda Emirates ayaa ugufiican, taasi waa dhab. Ururkan, oo guud ahaan ka hadlaya, waxa iska leh dawladda Dubai. Iyo hubaal waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan maal-gashiga Shirkadda.
Shirkadda oo dhan ma ahan oo keliya maaha suuqa Dubai. Emirates Airline ayaa si wacan looga yaqaanaa Boqortooyada Midowday iyo Maraykanka. Guud ahaan, maamulka shirkadu wuxuu ku yaalaa heer sare. Shaqooyinku waxay bixiyaan xaqiiqda, waxay u qalantaa inay la dagaallamaan maalin iyo habeenba. Sidaas darteed, shaqaale caalami ah oo caalami ah ayaa sida ugu dhakhsaha badan u raadinaya fursado la leh shirkadda Emirates Airline.
Resuming SANNI GnankpeDownload
Magacaygu waa Sanni Gnankpe - Shirkadda Dubai City oo ka socota Warbaahinta Bulshada.
Shirkadda Dubai City waxay sameyneysaa wax kasta oo aan kari karno si aan u caawino raaciyahayaga warbaahinta bulshada Sanni Gnankpe si aad shaqo u hesho la leh Imaaraad. Sanni Gnankpe wuxuu jeclaan lahaa inuu sahamin a Magaalada Dubai oo ah goob madadaalo ah oo loogu talagalay Expats.
Kooxdayadu waxay sameeyaan sida ugu fiican ee aan u kobcin karno profile iyo CV. Waxaa intaa dheer, waxaan rajeyneynaa in hal maalin uu maamuli doono: Magacaygu waa Sanni Gnankpe waxaanan hadda ka shaqeynayaa riyadayda Shaqeeyaha Emirates.
Shirkadda Dubai City ⭐⭐⭐⭐⭐ Waxay siineysaa martida fursad ay wax ku bartaan UAE Nolol-maalmeedka, Hagaha kharashyada, La-talinta hab-nololeedka ee ajaaniibta. 👳 Markaa, annagoo tan maskaxda ku hayna, waxaan rajo ku qabnaa ma ahan oo keliya Sanni inuu ku farxi doono. Ururkeenna wuxuu ku dhiirrigelinayaa kuwa kale ee ku sugan Imaaraadka Carabta. Marka, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad ka dhex shaqeyso United Arab Emirates.
Shirkadda Dubai City waxay hadda siisaa wax wanaagsan hagayaal ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayadu waxay go'aansadeen inay ku daraan macluumaadka luqad kasta anaga Shaqooyinka ku yaala Dubai. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.
0 Faallada faalaha